Ma Anigaa Waalan Mise Cadan baa laga Heesi!! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Wadar kastaba waaxid bey ka koobantahey, waxa waaxidka ku dabaqmo ayaa wadartana ku dureersado, sida uu waaxidku u xanuunsan karo, ayey wadartuna u xanuunsataa, sida waaxidka garaadkiisa iyo garashadiisuba ay hoos ugu dhici karaan, ayey wadartuna hoos ugu dhikartaa. Waaxid xanuunsan wadar fayow kama dhalato, waaxid garashadiisu hooseyso, wadar indheer garada kama dhalato.
Umaddeenu 30 sano ka badan ayey xanuun saneyd, heerar kala duwanba ha soo maro xanuunkaasi, taasi waxey keentey in ay dhadhamiya yaasha dareenkeedu is badalo, maadaama ay ku soo dhax nooleyd xaalad aanan caafimaad aheyn muddadaas dheer. Arrintani waxa ka dhalatey in ay isbadalaan cabirradi ama ha beeyadeedi oo dhan: sida miisaanki, beegii, iyo dhudhumintiiba. Sidaasi darteeda, uma baahnid caqli badan si aad u fahamtid wax yaalaha dalkeena hooyo ka dhacaya inta badan, ee waxaad u baahantahey caqli yari badan si aad u fahamtid inta badan. Dhacdooyinkana inaad ka dhax raadisid marka hore wax yaalaha aanan caqli galka aheyn ayaad u baahantahey, markaad ka weydid un ka dib, ka dhax raadi waxyaa laha caqli galka ah.
Tusaale ahaan, arrimahan hoos ku qoran dalkeenna unbey ka dhici karaan maanta iyo meelo yaroo la mida adduunka, dhacdooyinkan sidey u qoranyihiin ayey u kala horreeyeen, tusaale ahaan ayaanan u soo qaatey ee kalligood maaha:
1- Ardey ajnibi ah ayaa idaacad ka maqley ” maleyshiyaad raacsan wasiirka gaashaan dhigga ee Soomaaliya ayaa maanta ka qabsatey magaala heblo ciidamadii dowladda” ardeygii ajnibaga ahaa dhan uu warkii u qaado ayuu garan kari waayey, ka dib wuxuu raadiyey ardey Soomaali ah oo jaamacadda la dhiganayey, markuu u sheegey wixi uu soo maqley ayuu su’aashan weydiiyey “sidee buu wasiir gashaan dhig u yeelan karaa maleyshiyaad u gaara? haddiise uu isagu maleyshiyaad kiisa gaarka ah amar dagaal siinayey, yaa ciidanka dowlada amarka dagaal siinayey?” sheekadu dhab ayey aheyd, ardeyga Soomaaliga ahaana wuu ogaa, wuxuu aad iskugu dayey inuu fahamsiiyon sida ay dhabtu tahey, iyadoonan laga fiirinin dhanka ma caqli galbaa mise caqli gal maaha, laakiin nasiib darro wuu ku guulerysan waayey inuu fahamsiiyo ardeygii ajnabiga ahaa!!!
2- Habeen habeennada ka mida anigoo fiirsanayo SNTV, dalka dibadiisana joogo, ayaan ka daawadey beel meel ku shireyso oo leh dowladdaan icriraafkii kala noqoney, waxaa iiga sii darreyd markaan ku dhax arkey fadhigaasi dhaxdiisa, niman oqoon yahanna ah oo aan tirsan jirey una maleynayey iney mashruuc qaran xambaarsan yihiin oo shirkaasi ka dhax muudo, waxaana iiga sii xanuun badneyd, markey qaarkood meeshii ka dhax hadleen oo ay dhaheen, beesha go’aankeeda ayaan ku raacsannahey!!!
3- Odayaal iyo siyaasiyiin sheegtey iney beel beelaha ka midda matalayaan ayaa shir isugu yimid, go’aannadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa, in ay amar ku siiyeen wasiiradii iyo xildhibaanadii beeshaasi, ineysan ka qeyb galin fadhiyada labada gole midna: golaha wasiirada iyo baarlamaankaba. Waxaa la yaab laheyd iney fuliyeen amar kaasi, waxaase igala sii yaab badneyd, ineysan jirin cid jago ku weydey arrin kaasi, oo ay iskood ugu soo laabteen fadhiyadii labada gole, cid xitaa canaanteyna aysan jirin!!!
4- Gobal ama maamul gobaleed kuwa dalka ka jira kamida ayaa xanaaqey, war murtiyeed ayuuna soo saarey uu ku leeyahey, dowladdi Soomaaliya ayaan calaaqadka u jarey, yaa fahmi karo? yaase cid kale fahamsiin karto? Waa tii labadii ardey kala qabsatey oo kale: kii ajnabiga ahaa iyo kii Soomaliga ahaa?
Garaad sare iyo garasho dheer markaste waa looga baahanyahey dhan kastoo nolasha ka mid ah, laakiin waxyaabaha qaarkood ee dalkeena ka dhacaya, cabbir hoose iyo garaad liita ayey kaaga baahanyihiin, si aad u fahamtid. Haddii aad u baahatid, in aad raadineysidna, marka hore ka billow raadinta khaanadda ay ku jiraan ama lagu rido waxyaalaha aanan caqli galka aheyn, haddii kale inaadan walgaaba helin ayaa dhici karto. Markaad ka dhax weydid ka dib un, ka dhax raadi tan caqli galka ah.
W/Q Danjire: Cumar Idriis